iMac Pro, xatooyada Apple Store Valencia, macOS High Sierra Beta iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican waxaan ka imid Mac | Waxaan ka socdaa mac
Jordi Gimenez | | Noticias, Kombiyuutarada Mac
Ciidaha Kirismaska ​​ayaa ku soo dhowaanaya si ka dhakhso badan sidii aan filaynay maantana waa hore Axad, Diseembar 17. Toddobaadkan waxaan aragnay imaatinka nooca beta ee loogu talagalay macOS High Sierra iyo inta kale ee OS-ga Apple, laakiin sidoo kale waxaan haynaa ururinta wanaagsan wararka xiisaha leh ee dunida Mac iyo Apple guud ahaan.
Sida Axad kasta waxaan dooneynaa inaan soo uruurino wararka ugu caansan inta lagu jiro usbuucaan dhexdiisa waxaana ku xasuusan karnaa tan Daahfurka rasmiga ah ee bahalka iMac, iMac Pro, ama gebi ahaanba ka soo horjeeda tan sida ay tahay tan dhac ay ku soo gaareen Apple Store of Colon oo ku taal Valencia, iyo kuwo kale.
Marka lagu daro khadadka kor ku xusan ee kor ku xusan waxaan leenahay imaatinka beta-kii ugu horreeyay ee macOS High Sierra 10.13.3 hadda waa la heli karaa si loo soo dejiyo ka Xarunta horumarinta Apple ama iyada oo loo marayo habka cusbooneysiinta software-ka ee Mac App Store laftiisa.
Wararka soo socda ayaa la xiriira ciyaarta cusub ee Feral, Deus Ex: Aadamuhu wuu qaybsamay. Este ya waxaa loo heli karaa nidaamka deegaanka ee Apple macOS, sidaasna lagu ballaadhiyo tirada cayaaraha ee hadda loo bixiyo barnaamijka Apple.
Apple waxay soo saartay cusbooneysiin ku saabsan saldhigyada AirPort ee hagaajinaya u nuglaanshaha laga helay WPA2. Nooca cusub ee 7.7.9 ayaa loo heli karaa aaladaha taageera shabakadaha 802.11ac, halka cusbooneysiinta 7.6.9 loo heli karo saldhigyada saldhigyada ee 802.11n. Sikastaba midkoodna saldhigyada WiFi ee Apple ma noqon doono cusbooneysiin la'aan.
Ugu dambeyntiina waa inaan iftiimino warar kale oo la xiriira iMac Pro cusub oo ah in RAM-ka lagu xardhay sabuuradda oo aysan macquul ahayn in wax laga beddelo. IMac Pro waa 27-inch iMac ma jiro dabool dambe oo lagu daro ama laga saaro RAM marka qaabeynta ay adeegsadayaashu codsadaan waa qaabeynta waligeed sii jiri doonta ilaa aynaan dhex marno adeeg farsamo. Ku dar tan in kooxdu haysato jabinta Apple T2 ee badbaadada kooxda, wax la isla dhex maray iyo taas ayaa ugu dambeyntii la xaqiijiyay.
Ku raaxayso Axadda!
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » iMac Pro, xatooyada Apple Store Valencia, macOS High Sierra Beta iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Hub loogu talagalay iMac iyo iMac Pro oo ku dhejinaya jiiska